Ungamvimba njani umntu kwiTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 395
Ukuthintela omnye wabafowunelwa bethu kwiTelegram yenye yezona zinto zilula ukwenza ngaphakathi kwesicelo esidumileyo sokuthumela imiyalezo. Ngoku unethuba lokuthatha isigqibo sokuba ubhloka nini omnye wabahlobo bakho kwaye umthintele ekuthetheni nawe.
KwiTelegram ungavimba ukuba ufuna umsebenzisi ongakanani, kwaye ukuba uyazisola ngesenzo esenziweyo, uya kuba nenketho yokuyivula. Ngokusebenzisa inqaku elilandelayo sikubonisa inyathelo ngenyathelo ukubhloka abasebenzisi beli qonga ngaphandle kokukrokra.
Kuyenzeka ukuba ubhloke abasebenzisi kwiTelegram
Njengakwezinye iinkqubo zokuthumela imiyalezo, I-Telegram inikezela abasebenzisi bayo ithuba lokukwazi ukuvimba kwabo bantu singanqweneli ukunxibelelana nabo.
Ngaba umntu ongamaziyo ukongeze kuluhlu lwabahlobo babo? Olona khetho luphambili lokuthintela aba bantu ekubeni basibhalele kukuyivimba. Isicelo sidibanisa esi sixhobo siluncedo kakhulu kwaye kulula kakhulu ukusisebenzisa.
Amanyathelo okubhloka umntu kwiTelegram
Kakuhle kakhulu. Makhe siye kwinto enomdla kuthi kwaye yiyo funda indlela yokuthintela abafowunelwa ngaphakathi kwesicelo seTelegram. Inyaniso kukuba yinkqubo elula elula nekhawulezayo. Uzakufuna kuphela imizuzu embalwa ukuvimba omnye wabafowunelwa bakho.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile fikelela kwisicelo yocingo
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Useto"
Ngoku khetha ukhetho "Ukhuseleko kunye nemfihlo"
Uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo ziya kuvela. Kuya kufuneka ucofe eyokuqala apho ithi "Ibhlokiwe"
Isicelo siza kukubonisa uluhlu olunabo bonke abasebenzisi obabhlokileyo ngaphakathi kweqonga. Ukuvimba umfowunelwa omtsha kufuneka ucofe nje ku "Vimba" iqhosha elivela phezulu. Unokuthintela abantu kunye namaqela kunye namajelo.
Vimba umnxibelelwano kwingxoxo
Kukho enye indlela yokuvimba abasebenzisi ngaphakathi kwesicelo I-Telegram kwaye ngokuthe ngqo ingxoxo. Sikwenza njani oku? Nantsi inkcazo emfutshane enokukunceda kakhulu:
Khetha thetha nomntu ofuna ukumvimba
Ngoku nqakraza kwi iprofayile yakho
Cinezela kumanqaku amathathu kwicala lasekunene lesikrini
Cofa ku "Vimba"kwaye ilungile.
Kwenzeka ntoni xa ndivimba umfowunelwa?
Into yokuqala ekufuneka uyazi kukuba Umntu ogqibe kwelokuba umvimba kwisicelo akasayi kufumana naluphi na uhlobo lwesaziso ngale nto uyenzileyo. Oko kukuthi, ayizukufumanisa ukuba uyivimbile, ubuncinci hayi ngesaziso esithe ngqo.
Umfowunelwa othintelwe kwiTelegram Abayi kuba nakho ukukuthumela imiyalezo okanye babelane ngalo naluphi na uhlobo lomxholo kunye nawe, umzekelo iifoto, iividiyo, iifayile okanye iifowuni zevidiyo.
Abantu obabhlokileyo kuluhlu lwabahlobo bakho ngekhe bakwazi ukufikelela kwiprofayile yakho okanye iwonga lakho online.
1 Kuyenzeka ukuba ubhloke abasebenzisi kwiTelegram
2 Amanyathelo okubhloka umntu kwiTelegram
3 Vimba umnxibelelwano kwingxoxo
4 Kwenzeka ntoni xa ndivimba umfowunelwa?